568s पोष्ट स्क्रिप्टम - हीलसम रोडको रक्षा [GER Comms / ENG Subs] images and subtitles
मसँग शत्रु जुलुस! सबैको लागि जानकारीको रूपमा: यदि पोइन्ट अब पतन हुन्छ भने ... सबैजना तत्कालै अर्को पोइन्टमा पछाडि हट्छन्! म तोपखाना संग बिन्दु हिट हुनेछ! कप्तान बुझे! कृपया तपाइँको स्क्वाडमेटहरूलाई बताउनुहोस्! रैली सेट केटाहरू! त्यहाँ खाडलको उत्तरमा शत्रुको पैदल सेना छ! हो, जानकारी को लागी धन्यवाद! तिनीहरूलाई खाली गर्नुहोस् र पोइन्टमा आउनुहोस्! जताततै झाडीहरूमा! आँखा खोलियो, त्यहाँ कतै शत्रुको राली छ! राम्रो देखिन्छ - ठीक छ, प्वाइन्टमा उत्तर प्राप्त गरौं! दुश्मन ट्या tank्क पोइन्टको उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम सर्दै! वनमा स्निपर! हो, हो! तपाईंले यो सुन्नुभयो, रैली खाली गर्न आवश्यक छ! तिनीहरू हामीलाई आउटफ्यान्क गर्न खोजिरहेका छन्! दक्षिणबाट शत्रु पैदल सेना! सावधान, रैली र बिन्दु बीचमा सुरक्षित छैन! म हिट भयो! दक्षिण पूर्व! ठीक छ, मिल्यो - दक्षिण सुरक्षित गर्नुहोस्! ज into्गलमा छिर्नुहोस्, हामी फोहोर भयौं! के इन्फैन्ट्रीले मलाई बताउन सक्दछ कि कुन ठाउँमा बारूला ड्रप गर्ने? रैली स्पष्ट छ, त्यो केहि हो ... राम्रो काम! 05 हुनसक्छ? ० राम्रो देखिन्छ, सीधा विन्दुमा! दक्षिण पूर्वबाट जुलुसमा शत्रुहरू आउँदैछन्! दक्षिण पूर्व हेर्नुहोस् - तिनीहरू फेरि सडकमा दौडिन सक्छ! रैली अहिलेका लागि सुरक्षित छ, राम्रो छ! राम्रो त्यहाँ तल गरियो! यहाँ यस खाडलमा! तिनीहरू खाडलमा छन्! त्यहाँ पैदल सेनाको भार छ हामी पहिले भन्दा पहिलेको स्थानमा! खाई दक्षिण पूर्वमा सुरक्षित गर्नुहोस्! हामीले केहि भेट्टायौं! हो, त्यो सुन्नुभयो! तपाईं दक्षिण को टीम! अझै दक्षिण-पश्चिम हुनु पर्छ! त्यो गधाले मलाई लक्ष्य गर्दै! थप पूर्व! पूर्वबाट आउँदैछ! हामीले फुटबल मैदान भर ब्रेन क्यारियर पाएका छौं! N 10 मा पैदल सेना! अहिलेको लागि तल बस्नुहोस्! माथिल्लो चतुर्भुजमा! हाम्रो स्थिति को पूर्व! के रेकन ट्या tank्कले यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ? चिकित्सा मात्र हेर्नुहोस्, तपाईं दक्षिणको मात्र! धन्यवाद! पोइन्ट कस्तो छ? धेरै धन्यवाद! पान्थर अहिलेको लागि पछि हट्दैछ! बुझे! रेडियो, यहाँ रहनुहोस्! नयाँ रैली केटाहरू माथि छ! हामी अझै दक्षिण मा समस्या छ! तर पुनः कारले हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ! जुलुसको उत्तर शत्रु! मेरो टोली ममा - हामी रोडको साथ उत्तरतर्फ सर्छौं! हामीले बिन्दुको पश्चिम तर्फ बन्द गर्न आवश्यक छ! बुझे! त्यहाँ पैदल सेना! Strafting जंगल मा चलाउन! केवल उत्तर, तपाईं को उत्तर पश्चिम! उत्तर-पश्चिम, पैदल सेना, स्क्वाडलेड, सावधान! सहि सडकमा, पश्चिम! हो, बुझियो! दक्षिणमा एक रैली नष्ट भयो! सडकको खाई तल सार्नुहोस् - दुबै पक्ष प्रयोग गर्नुहोस्! तिनीहरू यहाँ सडक नजिक छन् - सावधान! पोइन्टमा बढिरहनुहोस्! तिनीहरूलाई सुदृढीकरण आवश्यक छ! पोइन्ट म्यान गरिएको छैन! हामी भित्र पछाडि सर्न कोशिस गर्दैछौं! हामी यसमा छौं! तिनीहरू पागल उत्तर पूर्व जस्तो मरेका छन्! बाहिर हेर्नुहोस्, ठीक अगाडि! ग्रेनेड बाहिर छ! छिटो ... उत्तर पश्चिम, यहाँ हेर्नुहोस्! हामीसँग यहाँ पर्याप्त व्यक्तिहरू छन् जुन हामी यसलाई फिर्ता लिन सक्दछौं! समस्या छैन! अलि अलि गर्दै! हामी पछाडि क्याप गर्दैछौं तर वास्तवमै बिस्तारै! यदि हामीले पायौं भने, बुँदा पछि पछाडि आर्टिस्ट पश्चिम प्रयोग गर्नुहोस्। अनुमानित मार्क कृपया! मार्कर सेट, सानो स्प्रिड! हामी बिन्दुमा आर्टि भइरहेका छौं! यसको पछाडि उत्तर-पश्चिम! हामी पछाडि क्याप गर्दैछौं र एउटा MSP नष्ट गर्यौं! धेरै राम्रो! तोपखाने चिन्हमा आउँदै, सानो त्रिज्या! १२ घ राउन्ड! उत्तम! कला पोइन्टमा आउँदैछ, मार्क सेट - कभर लिनुहोस्! सानो त्रिज्या तर तपाईलाई कहिले थाहा छैन! धेरै धन्यवाद! एक पटक आर्टी सकिसकेपछि, पोइन्टमा जानुहोस्, उत्तर-पश्चिम तर्फ सुरक्षित गर्नुहोस्! धन्यवाद कागजात! स्वागतम्! राम्रो काम, राम्रो काम! पहाडको पछाडिको सानो खाडलमा एक छ! बुझियो! बिन्दुमा दुश्मन तोपखाना! शत्रु मोर्टार, हो! तिनीहरू अझै उत्तर मोर्टार स्थिति छ! त्यसमा स्थान थाहा छ? उत्तर, सडक अन्तर्गत! पोइन्ट स्पष्ट केटाहरू हो! यहाँ आउनुहोस्! के कुनै एक स्क्वाडले आफ्नो स्नाइपरलाई यसको लागि अलग गर्न सक्दछ? यो फेला पार्नको लागि, त्यसोभए हामी यसबाट छुटकारा पाउँछौं? वा कम्तिमा मेरो लागि चिन्ह पाउनुहोस्? कम्तिमा दुई पैदल सेना उत्तर, सडकको नजिक! सुझाव दिनुहोस्: पोइन्ट १ मा शत्रु मोर्टार ईम्प्लेसमेन्ट ... बन्कर इम्प्लेसमेन्ट छ मोर्टार त्यहाँ हुन सक्छ! पनि छैन ... उत्तर-पश्चिमबाट नयाँ हमला, सडकमा! सडक छेउ खाड, बाँया पट्टि! उत्तर पश्चिम, हमला, सडकको बाँया पक्ष खाडलमा केटाहरू! केहि कभर पाउनुहोस्! सडकको दायाँ पट्टि पनि! यदि तपाइँले मलाई चिह्न पाउनुभयो भने म स्ट्रफि run रन पठाउन सक्छु! बाटोमा! कला चिन्ह, दक्षिण पश्चिमदेखि उत्तर पूर्वमा कृपया! शत्रु मोर्टार नष्ट गरियो! तिनीहरूलाई त्यस खाडलमा दबाउनुहोस् - हामी त्यहाँ स्ट्रफिंग रन भइरहेका छौं! सडकमा जट्ट! स्ट्रफिंग बाटोमा दौडियो! धेरै धन्यवाद! तिनीहरूलाई दबाइ राखेका केटाहरूलाई राख्नुहोस्! तिनीहरू सबै मर्छन्! स्क्वाड बेकर हिट हुन सक्छ! सडकमा खाडलमा धुवाँ फ्याँक्नुहोस्! एक पटक स्ट्र्याफिंग रन हामी अगाडि बढ्छ! त्यहाँ झाडीमा! एक वा दुई? One! धन्यवाद! ठीक छ - त्यहाँ जानुहोस्! स्वागतम्! अझै खाडलमा - होशियार!
पोष्ट स्क्रिप्टम - हीलसम रोडको रक्षा [GER Comms / ENG Subs]
< start="7.46" dur="1.42"> मसँग शत्रु जुलुस! >
< start="13.72" dur="4.12"> सबैको लागि जानकारीको रूपमा: यदि पोइन्ट अब पतन हुन्छ भने ... >
< start="18.28" dur="5.44"> सबैजना तत्कालै अर्को पोइन्टमा पछाडि हट्छन्! म तोपखाना संग बिन्दु हिट हुनेछ! >
< start="24.6" dur="1.12"> कप्तान बुझे! >
< start="26.02" dur="3.72"> कृपया तपाइँको स्क्वाडमेटहरूलाई बताउनुहोस्! >
< start="31.22" dur="5.02"> रैली सेट केटाहरू! त्यहाँ खाडलको उत्तरमा शत्रुको पैदल सेना छ! >
< start="36.78" dur="1.66"> हो, जानकारी को लागी धन्यवाद! >
< start="39.6" dur="2.26"> तिनीहरूलाई खाली गर्नुहोस् र पोइन्टमा आउनुहोस्! >
< start="42.46" dur="2"> जताततै झाडीहरूमा! >
< start="45.82" dur="2.36"> आँखा खोलियो, त्यहाँ कतै शत्रुको राली छ! >
< start="58.5" dur="1.92"> राम्रो देखिन्छ - ठीक छ, प्वाइन्टमा उत्तर प्राप्त गरौं! >
< start="60.42" dur="3.04"> दुश्मन ट्या tank्क पोइन्टको उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम सर्दै! >
< start="63.46" dur="1.94"> वनमा स्निपर! हो, हो! >
< start="66.18" dur="2.38"> तपाईंले यो सुन्नुभयो, रैली खाली गर्न आवश्यक छ! >
< start="68.86" dur="2.7"> तिनीहरू हामीलाई आउटफ्यान्क गर्न खोजिरहेका छन्! >
< start="71.62" dur="5.06"> दक्षिणबाट शत्रु पैदल सेना! सावधान, रैली र बिन्दु बीचमा सुरक्षित छैन! म हिट भयो! >
< start="76.92" dur="2.66"> दक्षिण पूर्व! ठीक छ, मिल्यो - दक्षिण सुरक्षित गर्नुहोस्! >
< start="79.58" dur="1.78"> ज into्गलमा छिर्नुहोस्, हामी फोहोर भयौं! >
< start="81.44" dur="3.7"> के इन्फैन्ट्रीले मलाई बताउन सक्दछ कि कुन ठाउँमा बारूला ड्रप गर्ने? >
< start="85.26" dur="2.88"> रैली स्पष्ट छ, त्यो केहि हो ... राम्रो काम! >
< start="88.66" dur="1.04"> 05 हुनसक्छ? >
< start="91.78" dur="3.98"> ० राम्रो देखिन्छ, सीधा विन्दुमा! दक्षिण पूर्वबाट जुलुसमा शत्रुहरू आउँदैछन्! >
< start="101.1" dur="3.34"> दक्षिण पूर्व हेर्नुहोस् - तिनीहरू फेरि सडकमा दौडिन सक्छ! >
< start="105.74" dur="2"> रैली अहिलेका लागि सुरक्षित छ, राम्रो छ! >
< start="117.42" dur="3.24"> राम्रो त्यहाँ तल गरियो! यहाँ यस खाडलमा! तिनीहरू खाडलमा छन्! >
< start="120.66" dur="4.56"> त्यहाँ पैदल सेनाको भार छ हामी पहिले भन्दा पहिलेको स्थानमा! खाई दक्षिण पूर्वमा सुरक्षित गर्नुहोस्! >
< start="135.92" dur="3.6"> हामीले केहि भेट्टायौं! हो, त्यो सुन्नुभयो! तपाईं दक्षिण को टीम! >
< start="140.36" dur="1.8"> अझै दक्षिण-पश्चिम हुनु पर्छ! >
< start="146.98" dur="4.32"> त्यो गधाले मलाई लक्ष्य गर्दै! थप पूर्व! पूर्वबाट आउँदैछ! >
< start="152.44" dur="4.66"> हामीले फुटबल मैदान भर ब्रेन क्यारियर पाएका छौं! N 10 मा पैदल सेना! >
< start="157.5" dur="3.66"> अहिलेको लागि तल बस्नुहोस्! माथिल्लो चतुर्भुजमा! >
< start="161.94" dur="3.1"> हाम्रो स्थिति को पूर्व! >
< start="165.82" dur="2.44"> के रेकन ट्या tank्कले यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ? >
< start="168.7" dur="2"> चिकित्सा मात्र हेर्नुहोस्, तपाईं दक्षिणको मात्र! >
< start="184.54" dur="2"> पोइन्ट कस्तो छ? >
< start="187.2" dur="1.36"> धेरै धन्यवाद! >
< start="194.72" dur="2.54"> पान्थर अहिलेको लागि पछि हट्दैछ! >
< start="198.68" dur="1.1"> बुझे! >
< start="203.38" dur="2"> रेडियो, यहाँ रहनुहोस्! >
< start="208.32" dur="2"> नयाँ रैली केटाहरू माथि छ! >
< start="212.78" dur="3.06"> हामी अझै दक्षिण मा समस्या छ! तर पुनः कारले हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ! >
< start="218.24" dur="4.36"> जुलुसको उत्तर शत्रु! मेरो टोली ममा - हामी रोडको साथ उत्तरतर्फ सर्छौं! >
< start="222.6" dur="2.08"> हामीले बिन्दुको पश्चिम तर्फ बन्द गर्न आवश्यक छ! >
< start="225.86" dur="1.3"> बुझे! त्यहाँ पैदल सेना! >
< start="227.2" dur="3.28"> Strafting जंगल मा चलाउन! केवल उत्तर, तपाईं को उत्तर पश्चिम! >
< start="230.48" dur="3.16"> उत्तर-पश्चिम, पैदल सेना, स्क्वाडलेड, सावधान! >
< start="234.76" dur="2.8"> सहि सडकमा, पश्चिम! हो, बुझियो! >
< start="239.82" dur="2"> दक्षिणमा एक रैली नष्ट भयो! >
< start="242.64" dur="2.56"> सडकको खाई तल सार्नुहोस् - दुबै पक्ष प्रयोग गर्नुहोस्! >
< start="245.32" dur="1.94"> तिनीहरू यहाँ सडक नजिक छन् - सावधान! >
< start="269.96" dur="3.3"> पोइन्टमा बढिरहनुहोस्! तिनीहरूलाई सुदृढीकरण आवश्यक छ! पोइन्ट म्यान गरिएको छैन! >
< start="273.52" dur="1.66"> हामी भित्र पछाडि सर्न कोशिस गर्दैछौं! >
< start="276.5" dur="1.34"> हामी यसमा छौं! >
< start="287.92" dur="2"> तिनीहरू पागल उत्तर पूर्व जस्तो मरेका छन्! >
< start="290.56" dur="1.7"> बाहिर हेर्नुहोस्, ठीक अगाडि! >
< start="293.08" dur="1.42"> ग्रेनेड बाहिर छ! >
< start="295.88" dur="0.92"> छिटो ... >
< start="298.12" dur="1.3"> उत्तर पश्चिम, यहाँ हेर्नुहोस्! >
< start="300.12" dur="3.28"> हामीसँग यहाँ पर्याप्त व्यक्तिहरू छन् जुन हामी यसलाई फिर्ता लिन सक्दछौं! समस्या छैन! >
< start="303.9" dur="1.98"> अलि अलि गर्दै! >
< start="315.34" dur="2"> हामी पछाडि क्याप गर्दैछौं तर वास्तवमै बिस्तारै! >
< start="318.28" dur="3.04"> यदि हामीले पायौं भने, बुँदा पछि पछाडि आर्टिस्ट पश्चिम प्रयोग गर्नुहोस्। >
< start="322.8" dur="2"> अनुमानित मार्क कृपया! >
< start="329.72" dur="2"> मार्कर सेट, सानो स्प्रिड! >
< start="334.8" dur="4.08"> हामी बिन्दुमा आर्टि भइरहेका छौं! यसको पछाडि उत्तर-पश्चिम! >
< start="341.98" dur="3.24"> हामी पछाडि क्याप गर्दैछौं र एउटा MSP नष्ट गर्यौं! धेरै राम्रो! >
< start="346.4" dur="4"> तोपखाने चिन्हमा आउँदै, सानो त्रिज्या! १२ घ राउन्ड! उत्तम! >
< start="350.46" dur="2.74"> कला पोइन्टमा आउँदैछ, मार्क सेट - कभर लिनुहोस्! >
< start="353.42" dur="1.52"> सानो त्रिज्या तर तपाईलाई कहिले थाहा छैन! >
< start="355.82" dur="1.46"> धेरै धन्यवाद! >
< start="359.78" dur="3.76"> एक पटक आर्टी सकिसकेपछि, पोइन्टमा जानुहोस्, उत्तर-पश्चिम तर्फ सुरक्षित गर्नुहोस्! >
< start="364.54" dur="1"> धन्यवाद कागजात! >
< start="367.42" dur="1.24"> स्वागतम्! >
< start="384.48" dur="3.62"> राम्रो काम, राम्रो काम! पहाडको पछाडिको सानो खाडलमा एक छ! >
< start="389.26" dur="1.26"> बुझियो! >
< start="397.62" dur="1.98"> बिन्दुमा दुश्मन तोपखाना! >
< start="399.6" dur="3.1"> शत्रु मोर्टार, हो! तिनीहरू अझै उत्तर मोर्टार स्थिति छ! >
< start="405.46" dur="1.76"> त्यसमा स्थान थाहा छ? >
< start="408.52" dur="2"> उत्तर, सडक अन्तर्गत! >
< start="419.22" dur="2"> पोइन्ट स्पष्ट केटाहरू हो! यहाँ आउनुहोस्! >
< start="423.86" dur="3.22"> के कुनै एक स्क्वाडले आफ्नो स्नाइपरलाई यसको लागि अलग गर्न सक्दछ? >
< start="428.46" dur="2"> यो फेला पार्नको लागि, त्यसोभए हामी यसबाट छुटकारा पाउँछौं? >
< start="432.66" dur="2.48"> वा कम्तिमा मेरो लागि चिन्ह पाउनुहोस्? >
< start="438.98" dur="4.28"> कम्तिमा दुई पैदल सेना उत्तर, सडकको नजिक! >
< start="446.78" dur="4.14"> सुझाव दिनुहोस्: पोइन्ट १ मा शत्रु मोर्टार ईम्प्लेसमेन्ट ... बन्कर इम्प्लेसमेन्ट छ >
< start="450.92" dur="2.82"> मोर्टार त्यहाँ हुन सक्छ! पनि छैन ... >
< start="461.52" dur="2.44"> उत्तर-पश्चिमबाट नयाँ हमला, सडकमा! >
< start="463.96" dur="1.7"> सडक छेउ खाड, बाँया पट्टि! >
< start="467.06" dur="3.66"> उत्तर पश्चिम, हमला, सडकको बाँया पक्ष खाडलमा केटाहरू! >
< start="470.88" dur="2"> केहि कभर पाउनुहोस्! सडकको दायाँ पट्टि पनि! >
< start="472.88" dur="2.48"> यदि तपाइँले मलाई चिह्न पाउनुभयो भने म स्ट्रफि run रन पठाउन सक्छु! >
< start="476.2" dur="1.32"> बाटोमा! >
< start="487.06" dur="3.32"> कला चिन्ह, दक्षिण पश्चिमदेखि उत्तर पूर्वमा कृपया! >
< start="491.14" dur="1.82"> शत्रु मोर्टार नष्ट गरियो! >
< start="494.7" dur="3.56"> तिनीहरूलाई त्यस खाडलमा दबाउनुहोस् - हामी त्यहाँ स्ट्रफिंग रन भइरहेका छौं! >
< start="499.8" dur="1.86"> सडकमा जट्ट! स्ट्रफिंग बाटोमा दौडियो! >
< start="501.66" dur="1.18"> धेरै धन्यवाद! >
< start="504.46" dur="2.72"> तिनीहरूलाई दबाइ राखेका केटाहरूलाई राख्नुहोस्! तिनीहरू सबै मर्छन्! >
< start="515.88" dur="2"> स्क्वाड बेकर हिट हुन सक्छ! >
< start="520.52" dur="3.38"> सडकमा खाडलमा धुवाँ फ्याँक्नुहोस्! >
< start="523.9" dur="2.38"> एक पटक स्ट्र्याफिंग रन हामी अगाडि बढ्छ! >
< start="532.24" dur="1.44"> त्यहाँ झाडीमा! >
< start="534.1" dur="1.36"> एक वा दुई? >
< start="536.8" dur="1.5"> One! धन्यवाद! >
< start="538.3" dur="1.46"> ठीक छ - त्यहाँ जानुहोस्! >
< start="539.94" dur="1.14"> स्वागतम्! >
< start="564.22" dur="2"> अझै खाडलमा - होशियार! >